Landa Izifanekiso ze-Infographic ezingaphezu kwe-100 ze- $ 59 | Martech Zone
Landa Izifanekiso ze-Infographic ezingaphezu kwe-100 ze- $ 59
NgoMsombuluko, Novemba 18, 2013 NgoMgqibelo, Okthoba 20, 2018 Douglas Karr
Azikho izinkampani eziningi kakhulu ezingakwazi ukuthenga isu eligcwele lokuklama nokwenyusa le-infographics. Amaphakeji ethu ahluka ngentengo kepha ngokuvamile aqala cishe ku- $ 2,500 ocwaningweni, ekwakhiweni nasekukhuthazeni i-infographic yangempela. Vele, lokho kude kakhulu nesabelomali sezinkampani eziningi. Futhi izinkampani ezinabaqambi abakwazi ukuba zisebenze izinsuku emiqondweni ye-infographic! Eqinisweni, sithole ukuthi ukubonwa kwedatha kuyithalente eliyingqayizivele elingatholakali kubo bonke abaklami.
Kepha… uma unawo umklami futhi ungathanda ukukhiqiza i-infographic enikezwe izifanekiso ezithile, mfana kozakwethu ku-Infographic.li unedili elimangalisayo. Ngama- $ 59 US, ungakwazi landa ngaphezulu kwezakhiwo ezingama-35 ezihlukile kuzifanekiso ezi-105 ezahlukahlukene! Qiniseka ukuthi usebenzisa isixhumanisi sethu sokuxhumana ukuze wonge ithoni kulokhu okunikezwayo!
Thenga izifanekiso zakho ze-Illustrator Manje!
Amafayela atholakala kumafomethi we-Photoshop (PSD), Illustrator (AI), Encapsulated PostScript (EPS) ne-Jpeg (JPG)! Nasi isibonelo esisodwa nje ukuze ubone ikhwalithi nesikhathi esingene kulokhu:
Tags: landa i-infographicsizifanekiso ze-infograph infographicsinfographicama-infographic epsumdwebi we-infographici-infographic psdizifanekiso ze-infographicI-Marketing Infographics
I-GoSquared: Real-Time Analytics kanye nedatha
21 Imithetho Yezindlela Eziphumelelayo Zokuxhumana